शपथ सम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित, यस्तो छ शपथको नयाँ ढाँचा « Janata Samachar
जेठ ३०, २०७८ आइतबार
शपथ सम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित, यस्तो छ शपथको नयाँ ढाँचा
प्रकाशित मिति : जेठ ७, २०७८ शुक्रबार
काठमाडौं । शपथ सम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार जारी गर्नुभएको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
नयाँ अध्यादेशमा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले कार्यभार सम्हाल्नुअघि शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो शपथ सम्बन्धित पदाधिकारीले नेपाली भाषामा लिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। तर, आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहने पदाधिकारीलाई पनि अध्यादेशले रोक लगाएको छैन। शपथलाई अनुवाद गरेर आफैंले प्रमाणित गरी मातृभाषामा शपथ लिन सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
नयाँ अध्यादेशले तोकेको शपथको ढाँचा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारीका लागि हो। तर, अन्य कानूनमा ढाँचा तोकिएका पदाधिकारीले भने सोही बमोजिम नै शपथ लिने व्यवस्था छ। अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको शपथको ढाँचा मात्र अन्य कानूनमा नतोकिएका कारण यो ढाँचा मुख्यतः उनीहरूकै लागि लागू हुनेछ।
नयाँ अध्यादेशले शपथ गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली हटाएको छ। त्यसको सट्टा उनीहरूले ‘ईश्वर वा देश र जनता’का नाममा शपथ लिन्छु भन्नुपर्नेछ। ‘ईश्वर वा देश र जनता’ मध्ये कसको नाममा शपथ लिने हो, शपथ गर्नुपूर्व आफूलाई शपथ गराउने पदाधिकारीलाई त्यसबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
५१ वर्षअघि दरबार लगिएको ‘तलेजुको नेकलेस’ कसरी अमेरिका पुग्यो ?
काठमाडौँ । अमेरिकामा रहेकी कला–सम्पदा एवं साहित्यकी जानकार श्वेताज्ञानु बानियाँले शुक्रवार सिकागो म्युजियममा ‘तलेजु नेकलेस’
प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ ।
२०७८ जेठ ३० गते आइतवारको राशिफल
मेष-करियरको चिन्ताले मानसिक अशान्ति बढ्नेछ । प्रेममा धोका दिनेछन् । वादविवादले मित्रता टुट्नेछ । वृष-
अदालतमा ओली सरकारविरुद्ध मुद्दाको चाङ, अठाइस हजार मुद्दा अलपत्र
टंक पन्त/ जनतासमाचार काठमाडौ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबिरुद्ध धेरै मुद्दा परेका कारण
मेष-करियरको चिन्ताले मानसिक अशान्ति बढ्नेछ । प्रेममा धोका दिनेछन् । वादविवादले मित्रता टुट्नेछ । वृष- स्त्री पक्षबाट सहयोग आउनेछ ।…
आइतवारकाे माैसम : देशभर पूर्ण बदली…
हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्टयाङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको…
किन हुन्छ वहुविवाह ? यस्ता छन्…
हरेक व्यक्तिकाे विवाह उसको स्वभाव संस्कृति र आवश्यकतामा मात्र होइन कुण्डलीमा बिराजमान ग्रह दशामा पनि निर्भर रहन्छ ।
तलब वृद्धि कम भयो भन्दै सरकारी…
एजेन्सी । पाकिस्तानका सरकारी कर्मचारी तल वृद्धि कम भएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षमा सरकारले घोषणा गरेको…
तपाईको यो साता (जेठ ३० गतेदेखि…
मेष-काममा अशान्ति हुनेछ । पारिवारिक बोझ बढ्नेछ । मनमा शंका र चिन्ता बढ्नाले काममा व्यवधान आउनेछ । साताको मध्यमा भने…
२०७८ जेठ २९ गते शनिवारकाे राशिफल
अन्न कृषिमा आम्दानी वृद्धि हुनेछ । प्रिय वस्तुको प्राप्ति हुनेछ । पशुचौपायाबाट आम्दानी मिल्नेछ ।
राउटे युवतीको अश्लील भिडियो रोक्न राउटे बस्ती सिल, के छ…
कोरोना संक्रमितको छातीमा १२ इन्चको रड
प्रहरीमा उजुरीपछि विवाह बदर
उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लैजाने योजना, नयाँ मोडालिटी ल्याइने
प्रधानमन्त्री ओलीको सिको गरेर प्रदेशसभा भंग गर्ने पृथ्वीको प्रयास यसरी विफल भयो
आइतवारकाे माैसम : देशभर पूर्ण बदली रही केही स्थानमा मुसलधारे वर्षा हुने